यस्तो परिष्करण तल को कवर, टाइल्स रूपमा, विभिन्न लाभ लागि एउटा ठूलो छ। तिनीहरूलाई को - एक उच्च थर्मल चालकता। सामान्य परिस्थितिमा, यो त्यहाँ कोठा बाट गर्मी को एक पर्याप्त रिसाव छ देखि, एक drawback बरु छ। तर "न्यानो तल्ला" मा बिछाउने को मामला मा उच्च थर्मल चालकता लाभप्रद, सेरामिक्स पूर्ण ताप तत्व संग उत्पादन जो गर्मी, पहुंचाता देखि हो।
गरम सतहहरु गर्न टाइल्स माउन्ट प्रविधि पारंपरिक roughing आधारमा काम फरक छैन, तर तल्ला ताप लागि विशेष टाइल टाँसन प्रयोग गर्न आवश्यक हुनेछ। पारंपरिक योगों प्रक्रिया प्रयोग गरिने छ भने, त्यसपछि topcoat लामो छ गर्नेछ रहन - दुई हप्ता देखि सबै भन्दा राम्रो मा एक जोडी महिना।
किन विशेष गोंद प्रयोग गर्ने?
विशेष संरचना लागू गर्न सजिलै हुन सक्छ आवश्यकता व्याख्या - को मामला मा underfloor ताप, यो विशेष अवस्थामा काम गर्दछ। उदाहरणका लागि, तापमान अचाक्ली, गर्मी, र ठंडा यसलाई गोंद - तापमान को प्रभाव अन्तर्गत, आफ्नो संरचना विस्तार र अनुबंध, र त्यसपछि बस संक्षिप्त गर्छ।
कारण microporous सेरेमिक टाइल्स को गठन गर्न unstuck आउनेछ। पनि यस मामला मा थर्मल चालकता एकदम को स्तर घट्छ - संरचना, हावा voids गठन गर्दै छन्, संक्षिप्त जो थर्मल चालकता को स्तर कम।
तल्ला ताप लागि टाइल टाँसन: विशेषताहरु
माटोको साथै एक गरम टास्ने समाधान को एक सतह मा कुनै पनि अन्य टाइल्स लागि आवश्यक:
कुनै पनि परिणाम बिना स्थिर तापमान उतार चढाव सामना गर्न सक्छन्;
यो महत्वपूर्ण तापमान गर्न प्रतिक्रिया गर्दैन;
यसलाई पर्याप्त लचीलापन छ र सजिलै सतह लागू हुन्छ;
यसलाई कुनै न कुनै फर्श र टाइल राम्रो आसंजन छ;
यो तल्ला को वार्मिंग असर गर्दैन।
आधुनिक लोचदार टास्ने रचनाहरूको उच्च उपभोक्ता गुणहरू छन्। तिनीहरूले टाइल, पत्थर, चीनी माटो टाइल को स्थापना को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो विशेष बहुलक परिमार्जकहरू, को टास्ने मा शुरू जुन धन्यवाद हासिल गरिएको छ। यी सामाग्री कारण बांधन आधार को विस्तार प्रक्रिया चर्किएको को गठन अनुमति छैन।
तल्ला ताप लागि टाइल टाँसन: एक राम्रो छ, जो
एक glutinous समाधान जस्तै लग लिँदै, एक विशेष टास्ने उपयुक्त छन् कि सामाग्री ध्यान निश्चित हुन। पनि प्याकेज मा प्रयोग गर्न सकिन्छ मिश्रण underfloor ताप समारोह छ कि यसो गर्न छ। आज, एक-घटक र दुई-घटक मिश्रण उत्पादन।
तितरबितर (एकल-घटक) टास्ने
यो तरिका पकाउन गर्नुपर्छ जो एक मोटी पेस्ट छ। एक ग्लू एक लामो समय को लागि कठोर - यो पहिले यो काम प्रदर्शन गर्ने साईट कारीगरों लागि जस्तै छ। अब solidification सही स्थापना त्रुटिहरू र टाइलहरू को स्थान ठीक गर्न अनुमति दिन्छ। घर कामदार यस को लागि लगभग 15 मिनेट हुनेछ।
दुई-घटक मिश्रण फरक epoxy रेजिन र polyurethane आधारमा गरिन्छ। तल्ला ताप लागि यस्तो टाइल टाँसन सुक्खा मिश्रण छ - यो प्रयोग गर्न पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। साथै, तपाईँले निश्चित भएको मार्गदर्शन पढ्नुपर्छ आवेदन गर्नु अघि - यो सबै अनुपात, साथै समय सेट रूपमा समावेश छन्। यी मिश्रण राम्रो सहन थिए र तापमान मा कुनै पनि परिवर्तन राम्रो आसंजन छ।
टाइल टाँसन सिमेन्ट आधारित
समाधान यी प्रकार बाहेक लोकप्रिय संरचना सिमेन्ट आधारमा। प्रयोग सामाग्री को विभिन्न ग्रेड को उत्पादन को लागि, यो यी उद्देश्यका पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट लागि धेरै लोकप्रिय छ। बांधन मिसिन तत्व बालुवा जरिवाना गरिन्छ। पनि भाग रूपमा फरक परिमार्जकहरू छ। यो सबै-उद्देश्य टास्ने जो पनि तयार छ सुक्खा मिश्रण छ। विशेषताहरु को प्रयोग परिमार्जकहरू निर्माता भर पर्छन्।
आज, निर्माण बजार मा आयात र घरेलू उत्पादन धेरै छन्। मात्र केही निर्माता, उत्पादनहरु मालिकको बीचमा लोकप्रिय छन् जो विचार।
यो जर्मन निर्माता, ब्रान्ड Ceresit ब्रान्ड अन्तर्गत हाम्रो देश विभिन्न सामाग्री मा निर्माण बजार आपूर्ति जो। सेरामिक्स, पत्थर, र क्लिंकर फर्श टाइल टाँसन न्यानो तल्ला लागि उपयुक्त लागि "Ceresit" चिह्न मुख्यमंत्री-14 अतिरिक्त, र SM-16 र 17 भने टाइल संगमरमर वा चूना, त्यसपछि उपयुक्त लोचदार उत्पादन आधारित Ceresit मुख्यमंत्री-115।
यो ब्रान्ड देखि उत्पादनहरु को सम्पूर्ण लाइन सबै आवश्यक विशेषताहरु छ। टाँसन एक आधार रूपमा ठोस राम्रो लचीलापन र आसंजन छ, र टाइल सतह संग।
यो ब्रान्ड को उत्पादन पनि हाम्रो देशमा धेरै लोकप्रिय छ। उत्पादन साइटहरु जर्मनी, र रूस मा अवस्थित छ। कम्पनी 10 वर्ष को लागि हाम्रो बजार आफ्नो उत्पादन प्रदान गर्दछ। निर्माता underfloor ताप लागि Keramic एक्सप्रेस गोंद उत्पादन गर्छ।
0.9 मिटर2को एक ठूलो क्षेत्रमा टाइल्स बिछाउने लागि जस्तै यो संरचना। यसलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन छ र उच्च आर्द्रता स्तर संग वातावरणमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मूल्य को संरचना जो यो एकदम लोकप्रिय बनाउँछ, उच्च छैन।
श्रृंखला Keramic प्रो उच्च लोच छ बरतन, संगमरमर, ग्रेनाइट र चूना टाइल्स माउन्ट गर्नका लागि उपयुक्त छ। उत्पादन उच्च लोच र राम्रो आसंजन द्वारा विशेषता छ।
तल्ला ताप "KNAUF" को लागि टाइल टाँसन - यो पनि हाम्रो देशमा कारखानों छ जो जर्मन कम्पनी, एक उत्पादन हो। यसरी, प्रस्तावित विश्वव्यापी उत्पादन - KNAUF फ्लेक्स। मिश्रण एक उच्च आसंजन, तापमान परिवर्तन गर्न लोच र प्रतिरोध छ। भिजेको क्षेत्रमा लागि उपयुक्त टाँसन को यो श्रृंखला। को संरचना माटोको र लागि राम्रो छ ग्रेनाइट टाइल्स।
र यो पूर्ण घरेलू ब्रान्ड हो। कम्पनी को उत्पादन तल्ला ताप लागि उच्च गुणस्तरीय टाइल टाँसन - "के prospectors प्लस"। यो तपाईंलाई ठोस मा माटोको टाइल्स, र सिमेन्ट स्थापना गर्न सक्दैन। उत्पादन उत्कृष्ट प्रदर्शन र एक किफायती मूल्य साईट बिल्डर्स र व्यवसायीक धन्यवाद बीच धेरै लोकप्रिय छ।
तल्ला ताप लागि टाइल टाँसन उत्पादन सबै घरेलू उद्यम बीच, "युनिस" बाहिर खडा। "युनिस प्लस" एक अद्वितीय संरचना छ। उत्पादन उच्च तापमान एक उच्च प्रतिरोध छ, र पनि उत्कृष्ट आसंजन दावा। उत्कृष्ट चिस्यान withstands र भवन विभिन्न प्रकार मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तल्ला ताप "युनिस प्लस" को लागि टाइल टाँसन किन्न सम्भव यसलाई बिल्डर्स बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाउन, एक किफायती मूल्य छ।
विक्रेता देखि प्रतिक्रिया, इटालियन ब्रान्ड Litokol को उत्पादनहरु को विशाल लोकप्रियता। संरचना Litoflex K80 उच्च लोच छ। Adhesive व्यापक न्यानो को फर्श मा टाइल्स को स्थापना को लागि प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि प्रकारको लागि उपयुक्त तल्ला टाइल्स।
उत्पादन लाइन underfloor ताप लागि एक-घटक र दुई-घटक उत्पादनहरु छ। छिटो प्रभाव Litoflex K98 र K99 छ। यी मिश्रण परिसर सबै प्रकार को दुवै भित्र र बाहिर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
साथै भवन निर्माण सामाग्री अन्य प्रकार रूपमा यी टास्ने मिश्रण पनि फाइदा र बेफाइदा छन्। तिनीहरूलाई सामना गर्दा विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईं लागि टाइल टाँसन चयन गर्न , तल्ला ताप समीक्षा तिनीहरूले हामीलाई एक विशेष संरचना वास्तविक र बेफाइदा बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ किनभने। त्यसैले, के तिनीहरूले यस्तो मिश्रण बारेमा, कामहरू तिनीहरूलाई पहिल्यै प्रयोग गर्नेहरूलाई भन्छन्?
राम्रो टास्ने संरचना अत्यधिक व्यापक दायरा भित्र थर्मल झटके गर्न प्रतिरोधी छ। तपाईं पनि एक सानो चिपचिपाहट, पर्याप्त लोच गोंद हुनेछ जो चयन गर्न सक्नुहुन्छ। कारण उच्च आसंजन गर्न टाइलहरू र कुनै न कुनै फर्श बीच आसंजन बढ्छ।
बेफाइदा पनि गोंद गलत तरिकाले, चयन गरिएको छ मात्र विशेष खातामा तल्ला कवर को विशिष्ट सुविधाहरू लिन प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, "Ceresit मुख्यमंत्री-14" छैन संगमरमर, ग्रेनाइट वा प्राकृतिक पत्थर को टाइलहरू लागि उपयुक्त छ।
को गोंद मिश्रण छनौट, को चिह्नों ध्यान निश्चित हुन। यो उत्पादन एक योजना समाप्तिको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर औंल्याए गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि स्थापना कठोर substrates, टास्ने उत्पादन वृद्धि मा गरिनेछ।
टाइल gluing गर्दा केही कलाकारहरूको सुदृढीकरण जाल प्रदर्शन। तल्ला ताप लागि यो उद्देश्य प्लास्टिक नेट र टाइल टाँसन लागि। कार्य र सञ्चालन अवस्था कस्तो छनौट गर्न राम्रो छ निर्भर गर्दछ।
ब्रान्डहरु लागि जाँदा, आज तपाईंलाई सजिलै घरेलू निर्माताहरु को उत्पादनहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाँसन आयात संरचना संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। घरेलू वा आयात, यो महत्त्वपूर्ण छ धेरै भरोसा सेल्समैन मान्छे, राम्रो राख्न एक विशेष उत्पादन बारे समीक्षा पढ्न होइन - उत्पादन खरिद गरेर, यसलाई के ख्याल गर्दैन। तल्ला ताप लागि टाइल टाँसन - एक राम्रो लोकप्रिय वस्तु, यसको बजार को दायरा व्यापक dvolno। तर व्यवसायीक को यस्तो मिश्रण मा चिरपरिचित कम्पनीहरु-निर्माताहरु सिफारिस प्राप्त गर्न।
सही विकल्प, साथै दक्ष प्रयोग - सेरेमिक टाइल्स द्वारा विश्वसनीयता र समाप्त फर्श को स्थायित्व को एक ग्यारेन्टी छ।
आकार, विशेषताहरु, फोटो: पलीथीन फोम बनेको पाइप लागि इन्सुलेशन सामाग्री
आफ्नै हात Dug: एक विस्तृत विवरण र रेखाचित्र
ठोस M350: आधारभूत विशेषताहरु र आवेदन
कन्टिनेन्टल तखता। अधिकार को विनियमन। रूसी संघ को कन्टिनेन्टल तखता
सिरका संग मसालेदार खीरे: को जाडो लागि नुस्खा
सर्जरी पछि पेट को रोगहरु
जाम irgi - मूल र स्वादिष्ट
शहर बाल अस्पताल № सेन्ट पीटर्सबर्ग को 57 Kirov जिल्ला: विवरण, समय तालिका, विशेषज्ञहरु र समीक्षा
मिथक र वास्तविकता: मा Novorizhskoe राजमार्ग पिरामिड